UJohn wenza inkcazo into ihlabathi elide ngowo-1 Yohane 2: 15-16
" Musani ukulithanda ihlabathi, kwanezinto ezisehlabathini. Nabani na olithandayo ihlabathi ayikho uthando lukaYise kuye. Ngokuba konke okusehlabathini, inyama kunye neminqweno yamehlo, noqhankqalazo lobu okulungileyo ubomi, akukho asikokuphuma kuye uYise, kokuphuma ehlabathini. "
" UThixo akasibizelanga ukuba ekungcoleni, kodwa ubomi wobungcwele. Ngoko ke, ngoku ugibayo, akagibi mntu, ugiba uThixo, owasinikayo nokusinika uMoya wakhe oyiNgcwele. " 1 Th 4: 7, 8
ERoma 6:19 isibongoza ukuba amalungu ethu kwi ulungiselelo lobulungisa, ungcwaliso, no-2 Korinte 7: 1 usibongoza ukuba bahlonela ephelelisa ubungcwele.
Ndicinga ukoyika oyinyaniso uThixo namandla kubomi amakholwa ukuba sifuna ubungcwele ebomini babo. Oko ndifuna ukugxininisa ngamandla!
Xa ukukhanya ubungcwele bukaThixo uzelwe uloyiko lokwenene kaThixo wayekhona.
Unetyala yentlonelo, ngaphantsi, ukuthobela, iintliziyo zethu umbulelo othobekileyo kwaye sikukhonze.
Kubaluleke kakhulu ukuba aye kulwa kwaye ngoyaba xa uMoya oyiNgcwele okuthile eLizwini, xa uThixo olukhanyisela ethile apho ufuna ukubona utshintsho ebomini bethu. Xa uThixo uthi; Oku akamkholisi kum, ukuba ndifuna ukuyeka ngoku, ukuba ngamaxesha anjalo, vele nje, okanye ucinga, oko ingeyongozi kakhulu, ngoko lokubandezeleka kuye uMoya oyiNgcwele kaThixo. "Hayi buhlungu uMoya oyiNgcwele kaThixo, lowo ufumene njenge wokutywina, naqiniselelwa imini yentlawulelo." Efese 4:30.
Ukuba ixesha elide xa ngoyaba uveza iNkosi, ngaphantsi bebona njengoko uMoya kaThixo ephantsi-iqhosha ilizwi ubani ngaphakathi, umntu uba "buthelezi". Lowo uthetha rhoqo ngokuzolileyo ngaphakathi kwethu.
Ndiza kunika umzekelo ebomini bam. Ekuqaleni ndidla kakhulu Wawabona ama-TV. Mna ke ngoko amava ngokucacileyo gqitha xa ndabona kwezinye iinkqubo zikamabonwakude, nokuba apho ke engcolileyo okanye equlethe nayiphi na into eyinqambi, uMoya oyiNgcwele ngaphakathi kwam waphendula waza abatoli kangakanani. Oku kunokuba ngumzekelo into nkqubo cop okanye idrama ukuba ndiyifumene umdla, yaye njengoko bebukele. Xa Kwadlula ixesha elide, ndabe wasityeshela isilumkiso uMoya oyiNgcwele kaThixo, yaye waqhubeka ukubona inkqubo enjalo, ngoko ke wamitha ixesha elide njengokuba ngokucacileyo uMoya Oyingcwele ezisezantsi iqhosha mngeni. Andibonanga elide indlela waba abatoli.
Kwenzeka ntoni? Kulungile, ngoko kwenzekileyo ukuba intliziyo yam eyayiza kuba buthelezi ngokunxulumene ubungcwele bukaThixo! ilizwi uMoya ngalaa nto ethile ukuba kulelwe. appallingly
Ngoku iza kuba ukubukela encinane kakhulu umabonwakude. Cinga sonke sinazo iindawo ukuba uMoya kaThixo ibonisa loo nto ayithethi ukumkholisa, kwaye apho kufuneka ukuba baguquke thina.
Uncedo kwinkqubo ukungcwaliswa lukhona. Siyazi ukuba bonke mangaphi amaxesha esiye bazama, kwiinzame zabo ukuze babe ngakumbi "bahanahanisi" AmaKristu singcwalisiwe, kodwa yintoni asikwenzi ukwenza oku. Silibale, okanye andazi indlela uThixo abanceda ngayo kwinkqubo ngobungcwalisa.
Ngo-Hezekile 11:19, 20, sifunda
Kunjalo mna ngokobuqu uthethe ngokucacileyo kum kule umnqweno ukuba ngakumbi njengoYesu abaqolileyo, kuba amazwi kaYesu kuYohane 15. Apha uYesu uthetha ngokwakhe njengoko ndingumdiliya wenyaniso / ndingumdiliya wenyaniso. Uthi ukuba kuphela ukuba sihleli kuye ngubani na umdiliya, iziqhamo liya kukhula. Uthi ukuba förblivandet emdiliyeni uya lwamasebe (vi) ukuze athwale isiqhamo esisityebi. UYesu athi kwivesi 5 "..., ningekum, aninakwenza nto."
Isebe lingenako Amandla elingelolakhe okanye iinzame unganciphisa nasiphi isiqhamo.
umsebenzi UMoya kaThixo lofefe kuthi, ukuba uthatha indawo Community uYesu ngokwakhe.
Ndicinga ukuba kwincindi yomdiliya, ekuthi kwezo nto kuphume iziqhamo, iidiliya enika ubomi, ndicinga kunokuthiwa kumfanekiso yoMoya oyiNgcwele, ubomi bakhe siyakhuthaza.